Southwest Airlines ma eryi doonto shaqaalaheeda sugaya ka -dhaafitaannada tallaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Southwest Airlines ma eryi doonto shaqaalaheeda sugaya ka -dhaafitaannada tallaalka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Southwest Airlines ma eryi doonto shaqaalaheeda sugaya ka -dhaafitaannada tallaalka.
Qandaraasle federaal ahaan, Southwest Airlines waxay hore u qorsheysay in dhammaan shaqaalaha aan la tallaalin ee aan weli helin ka -dhaafitaan caafimaad ama diimeed 8 -da Diseembar fasax aan la bixin.
Xusuus -qorku wuxuu shaqaalaha u xaqiijinayaa inay sii shaqayn karaan haddii ka -dhaafitaankooda aan weli la ansixin.
Halkii fasax aan la bixin, shaqaalaha Koonfur -galbeed ee sugaya xukunku waxay sii wadi doonaan helidda jeegga.
Haddii ka -dhaafitaankooda la diido, shaqaaluhu waxay dib u codsan karaan haddii ay hayaan macluumaad ama duruufo cusub.
Shaqaalaha Southwest Airlines hadda laguma qasbo inay qaataan fasax aan la bixin inta ay codsanayaan ka-dhaafitaannada waajibaadka tallaalka COVID-19.
Kaddib muddo toddobaad ah oo mudaaharaadyo, diidmo iyo duullimaadyo la joojiyay, ayay shirkaddu dib uga noqotay koorsadii waajibaadkeeda tallaalka shaqaalaha.
Southwest Airlines mar dambe kuma qasbi doono shaqaalaha sugaya go'aan ku saabsan ka -dhaafitaan diimeed ama caafimaad amarka tallaalka ee khasabka ah inay qaataan fasax aan la bixin inta kiiskooda go'aan laga gaarayo, sida ku cad qoraal ay heleen maanta adeegyada wararka.
Koonfur -galbeed waxay xaqiijisay sax ahaanshaha qoraalka, kaas oo shaqaalaha siinaya illaa 24 -ka Nofembar si ay u tallaalaan ama u codsadaan ka -dhaafitaan.
Halkii fasax aan la bixin, shaqaalaha sugaya xukunka ku saabsan ka -dhaafitaankooda waxay sii wadi doonaan inay helaan jeegga mushaharka waxayna xitaa sii wadi karaan inay ka shaqeeyaan “sida [Koonfur -galbeed] ay iskudubbarido [iyaga] iyaga oo buuxinaya shuruudaha (tallaalka ama hoyga saxda ah),” qoraalka ayaa sharxaya.
Waxaa qoray madaxweyne ku-xigeenka sare ee hawlgallada iyo soo dhaweynta Steve Goldberg iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo sarkaalka dadka Julie Weber, waxay u xaqiijinaysaa shaqaalaha inay sii wadi karaan shaqada haddii ka-dhaafitaankooda aan weli la oggolaan illaa iyo inta ay raacayaan xeerarka maaskaro iyo fogeynta bulshada, iyo ballan qaadaya in shaqaaluhu dib u codsan karaan haddii ka -dhaafitaankooda la diido haddii ay hayaan “macluumaad cusub ama duruufo [ay] jeclaan lahaayeen in Shirkadda tixgeliso.”
Sii deynta xusuusta ayaa timid kadib maalmo mudaaharaadyo ah oo ka dhacay dibedda xarunta Koonfur Galbeed ee Dallas iyo warar xan ah oo ku saabsan jirrooyinka ka dhex jira ilaaliyaasha hawada iyo shaqaalaha kale. Koonfur -galbeed waxaa lagu qasbay inay baajiso kumanaan duulimaad toddobaadkii hore - in ka badan 1,000 Axaddii oo keliya - in kasta oo ay diiday inay qirto waxa ka dambeeya baajinta, marar badanna ku eedaysay cimilada in kasta oo cirka cad iyo cadceedu jirto. Garoomada diyaaradaha ayaa lagu xanibay rakaab xanaaqsan iyadoo dadka safarka ah ay imaan lahaayeen si ay u helaan duulimaadyadooda si qarsoodi ah loo baajiyay.
Qandaraasle federaal ahaan, Southwest Airlines hore u qorsheeyay in dhammaan shaqaalaha aan la tallaalin ee aan weli helin ka -dhaafitaan caafimaad ama diimeed 8 -da December fasax aan la bixin.
Si ka duwan sidayaasha yar -yar, marka loo eego waajibaadka madaxweynaha ma lahan ikhtiyaarka u oggolaanaya shaqaalaha inay soo gudbiyaan imtixaanka toddobaadlaha ah. Toddobaadkii hore, 56,000 oo shaqaale Koonfur -galbeed ah ayaan weli qaadin tallaalka.
Tartanka Koonfur -galbeed ee United Airlines wuxuu qaatay waajibaadkiisa tallaalka bishii Agoosto, ka hor inta uusan Biden xitaa ku dhawaaqin xeerka federaalka, wuxuuna si la mid ah ugu hanjabay qofka aan u hoggaansamin fasax aan la bixin. Si kastaba ha ahaatee, garsoore heer federaal ah oo ku sugan Fort Worth ayaa si ku meelgaar ah uga hor istaagay shirkadda diyaaradaha inay horay u socoto ciqaabta. Ilaa 90% shaqaalaha shirkadda ayaa la sheegay inay tallaalaan.
Horaantii bishaan, wadayaasha Mareykanka ee sidayaal ah American Airlines, Alaska Airlines, iyo JetBlue waxay kaloo qaateen waajibaad tallaal oo federaal ah, maadaama loo arko inay yihiin qandaraaslayaal federaal ah sidaas darteedna aysan u qalmin inay ka baxaan jabkii.